फिल्म सिटीः दोलखावासीको सपनामा तुषारापात, लमजुङको गाउँसहरमा बन्ने « GDP Nepal
( Friday, October 18, 2019)
फिल्म सिटीः दोलखावासीको सपनामा तुषारापात, लमजुङको गाउँसहरमा बन्ने
Published On :5July, 2019 8:55 am
काठमाडौं । दोलखाको डाङडुँगे डाँडामा बन्ने भनिएको फिल्म सिटी अन्ततः निर्माण नहुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घाम नलाग्ने ठाउँ भन्दै कटु टिप्पणी गरेको यस क्षेत्रको सट्टा लमजुङको सदरमुकाम बेंसीसहर नजिकै फिल्म सिटी बनाउन सरकारले नै अग्रसरता लिएको हो ।
१२ अर्ब लागतमा डाङडुङ्गे डाँडामा फिल्म सिटी बनाउने भनिए पनि सरकारले पछिल्लो समय बजेट विनियोजन गरेको थिएन । तर, सरकारकै समन्वयमा लमजुङमा सिटी बनाउने तयारी भएको छ ।
बेंसीसहर नगरपालिकाअन्तर्गत गाउँसहरदेखि बाख्रेजगतसम्मको क्षेत्रलाई सिने नगरी बन्ने सम्झौता भएको हो । सिने नगरी बनाउन बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरोकारवालाहरूबीच सम्झौता भएको हो ।
बेंसीसहर नगरपालिकाका–३, ४, ५ र ९ अन्तर्गत पाँच हजार रोपनी क्षेत्रफलमा सिने नगरी निर्माण गर्न लागिएको हो । सिने नगरी निर्माण भएसँगै बेंसीसहरमा रंगमञ्च र पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास गरीएको बेसीशहर नगरपालिका प्रमुख गुमानसिँह अर्यालले बताए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र बेंसीसहर नगरपालिकाको रोहवरमा इटालीको वल्र्ड एरिया होल्डिङ प्रालि ¬र स्काई इन्टरटेनमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालि नेपालबीच सिने नगरी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा गाउँसहर क्षेत्रलाई ‘वल्र्ड स्काई सिने भिलेन नेपाल’को रूपमा प्रर्वद्धन र संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त फिल्म सिटीको निर्माण ५ देखि ७ वर्षमा पूरा हुने अनुमान गरिएको छ । अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रस्थान विन्दु र पछिल्लो समय होमस्टे हव बनेको लमजुङमा वार्षिक हजारौंको संख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउने गर्छन् ।
विवादास्पद चुनावपछि एनआरएनएले भन्यो– गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई राजनीतिबाट टाढा राखौं !
काठमाडौं । नवौँ गैरआवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन काठमाडौं घोषणा पत्र–२०१९ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ
गैरआवासीय नेपाली संघमा कुमार पन्तः कांग्रेस हार्यो तर गगन थापाले जिते !
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्त निर्वाचत भएका छन् । उपाध्यक्षा
एनआरएनको भद्रगोल चुनावले रामलक्ष्मणको भोटिङ मेसिनमाथि विश्वासको संकट !
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को नवौं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन यसपटक निकै भद्रगोल देखियो
हेल्सिन्की विमानस्थलमा अध्यागमन पार गर्नै १.२५ घण्टा, नेपालमा भने तोडफोड गर्ने एनआरएन !
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपालीको नवौं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशनमा भाग लिन आएका एक अष्ट्रेलियन नेपालीले
नेपाल टेलिकमको डाटालक्षित अटम अफर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ग्राहकहरुको सुविधाका लागि विभिन्न प्याकेज सहितको आकर्षक अटम अफर उपलब्ध गराएको
©2019 GDP NepalGDP Nepal